Izahay dia bilaogin'ny media sosialy 10 ambony! | Martech Zone
Alatsinainy Janoary 30, 2012 Alatsinainy Janoary 1, 2018 Douglas Karr
Mahagaga foana ny fankasitrahan'ny mpiara-mianatra anao - saingy tena mandray izany ny androany! Michael Stelzner's Mpandinika ara-media sosialy ny bilaogy dia hatreto, iray amin'ireo bilaogy media sosialy malaza, marika tsara sy voadidy tsara amin'ny Internet. Tsy vitan'ny hoe manana atiny lehibe sy hetsika tsy mampino izy… tsy tia tena koa izy amin'ny fampiroboroboana ny hafa.
Androany, ny famoahana ahy dia nantsoina ho iray amin'ireo bilaogin'ny media sosialy Top 10 an'ny Media Sosialista! Ity ny lisitra iray manontolo:
Vava ara-tsosialy - Vava ara-tsosialy, ilay sanganasan'i Francisco Rosales, dia manome fijerena lalina sy marina momba ny varotra media sosialy sy ny fironana izay misy fiatraikany amin'ny indostria misy antsika. Ny tranonkala dia misy lahatsoratra feno tsipiriany misy ohatra tena izy ary miresaka lohahevitra vaovao sy sarotra.
ViralBlog - ViralBlog dia manome onjam-pizarana haino aman-jery sosialy isan'andro amin'ny alàlan'ny fandinihana tranga sy lahatsoratra mahaliana hafa. Manana votoaty tena tsara ity tranonkala ity miaraka amin'ny torohevitra sy torohevitra mahasoa.
Jeff Bullas - Jeff Bullas mijery akaiky ny fomba hahitan'ny orinasa an-tserasera amin'ny alàlan'ny media sosialy. Manana votoaty tena tsara ity tranonkala ity miaraka amin'ny fahitana ny haino aman-jery sosialy.
Hubze - Hubze dia nanangana mpihaino tamin'ny alàlan'ny fifantohana amin'ny fironana amin'ny haino aman-jery sosialy sy ny toro-hevitra momba ny tetika marketing amin'ny media sosialy. Ilay tranonkala dia misy karazana haino aman-jery mahafinaritra, ao anatin'izany ny lahatsoratra sy podcast.
Ny Liona Varotra - Ny Liona Varotra avy amin'i Marcus Sheridan dia bilaogy mitady hananganana vondrom-piarahamonina manodidina ny marketing, bilaogy, orinasa ary fiainana. Mampiroborobo ny vondrom-piarahamonina matanjaka miaraka amin'ny fandraisana anjara lehibe amin'ny alàlan'ny fanehoan-kevitra ny tranonkala.
Fanosehana ara-tsosialy - Fanosehana ara-tsosialy avy any Stanford Smith dia manome torohevitra sy loharanom-pahalalana amin'ny bilaogy azo ampiharina amin'ny fomba fijery vaovao. Ny tranonkala dia misy lahatsoratra mamorona, mampahalala ary azo vakiana miaraka amin'ny torohevitra lalina noho ny salan'isa.
Heidi Cohen - Heidi Cohen manome fahitana marani-tsaina momba ny tetika sy ny fironana amin'ny haino aman-jery sosialy, mandritra ny fanaovana ny tsotra ho sarotra. Ahitana atiny feno sy feno fiheverana ilay tranonkala.
Blog MarketingTech - MarketingTech bilaogy dia manome fomba fiasa mifantoka amin'ny haitao amin'ny haino aman-jery vaovao. Ny tranonkala dia mandrakotra lohahevitra sy haino aman-jery isan-karazany, ao anatin'izany ny radio sy ny horonan-tsary.
Media mahafinaritra - Media mahafinaritra mitazona ny mpamaky ankehitriny amin'ny fironana indostrialy sy fitaovana vaovao ary manome paikady sy paikady amin'ny fampiasana Facebook sy marketing amin'ny media sosialy koa. Ny tranonkala dia misy fampahalalana vaovao be momba ny fitaovana sy sehatra vaovao.
SplashMedia - SplashMedia manome fahaiza-manao mahaliana amin'ny paikady, torohevitra ary fironana, raha ny SplashCasts kosa dia manolotra tantara fahombiazana lehibe. Ny tranonkala dia manasongadina fampiasana be dia be amin'ny fampisehoana horonantsary ary koa fandefasana isan-karazany miaraka amin'ny atiny lalindalina.
Misaotra ireo mpiasa sy mpitsara avy amin'ny Social Media Examiner. Tena nanetry tena tokoa aho ary nankasitraka ny fanampiana rehetra natolotray anay nandritra ny taona maro!
Tags: heidi cohenhubzeJeff Bullashaino aman-jery tiakoMarcus sharidanBlog Tech Marketingmanosika ny fiaraha-moninabilaogy media sosialyvava ara-tsosialysplashmediastandford smithny liona fivarotanabilaogy ambonybilaogy media sosialy ambonytop tenviralblog
Google Panda amin'ny Plain English
30 Jan 2012 amin'ny 3:16 PM
Arahabaina! Voninahitra mendrika izany, ary ao amin'ny orinasa mahatalanjona ianao! Misaotra anao nanome aingam-panahy antsika rehetra.
30 Jan 2012 amin'ny 3:18 PM
Misaotra betsaka, @ twitter-277728414: disqus!
30 Jan 2012 amin'ny 8:12 PM
Doug, napetrakao ara-bakiteny teo amin'ny sarintany ny afovoany andrefana raha ny amin'ny fampahalalana mahasoa sy ny fanehoan-kevitra izay manampy orinasa maro hahatratra sy hihoatra ny tanjon'ny marketing. Tototry ny tabataba fotsy ny fiarahamonin'ny media sosialy. Misaotra anao amin'ny maha-feo mazava fahalalana izay manampy antsika rehetra hanao tsara kokoa, ary hahavita ny zavatra rehetra. Miarahaba anao amin'ny fankasitrahana mendrika anao.
30 Jan 2012 amin'ny 8:28 PM
Marty, misaotra betsaka. Teny tena tsara avy amin'ny olona izay hajaiko fatratra! (raha azontsika atao ny manamarika ny Midwest 😉
Jan 31, 2012 ao amin'ny 11: 49 AM
Arahabaina. Izany no mahatonga anao ao amin'ny lisitry ny tsoratadidy.
1 Feb 2012 tamin'ny 7:55 maraina
Arahabaina. Mendrika izany, ianao dia iray amin'ireo lohan-dohako mankany amin'ny loharanom-pahalalana ho an'ny zavatra sosialy sy tranonkala rehetra
1 Feb 2012 tamin'ny 8:47 maraina
May 13, 2012 amin'ny 7: 44 AM
Tsy isalasalana fa ny Social Media Examiner dia bilaogy malaza eo amin'ny bilaogy media sosialy.
Ny fihetsika tsy misy fitiavan-tena dia mamaly foana rehefa ela. Manomboka izao dia ho
mpampiasa mahazatra io. Manantena aho fa hanampy ahy amin'ny fanatsarana ny fahaizako a